Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo baaraya sababta kala dirista Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ayaa muujiyey inuusan waxba kala socon go’aanka uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Muudey, ku kala diray Guddiga Maaliyadda. Wareysi 6 daqiiqo socday, oo uu siiyey VOA-da, ayaa Guddoomiye Mursal dhawr mar lagu weydiiyey waxa uu ka ogaa go’aankaas, hase ahaatee waxaa, isaga oo ka wareegsanaya inuu afka ku balaariyo, uu sheegay inuu Guddoomiye Muudey sameeyey sidii ay isaga la ahayd.
“Guddoomiye Kuxigeenka Koowaad ayaa go’aankiisa (Ama Guddoonka magaciisa haku hadlo), aragtidiisa sidii ay la ahayd sameeyey, saas ayuuna u dhigay” ayuu Xildhibaan Mursal ku yiri wareysigaas. Hadalkaas ayaa muujinaya inuu ka hor imaanayo inuu Guddoomiye Mursal si cad u sheego wixii uu Guddoomiye Muudey ku soo qoray warqadda uu ku kala diray Guddiga Maaliyadda, oo ahaa in go’aanka uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka wax ka ogaa.
Waxa uu wareysigiisa ku caddeeyey iney Guddoonka Golaha Shacabku sameeyeen baaritaan, laakiin uusan isagu arkin, aqrinna. Wuxuuse sheegay inuu eegi doono marka uu dalka dib ugu soo noqdo. Mursal waxa uu hadda joogaa Turkiga, maanta ayaana la filayaa inuu yimaado Muqdisho. Guddoomiyuhu wuxuu uu ku celceliyey inuusan Guddoonka Golaha meelna uga bixi doonin Xeer Hoosaadka Golaha, haddii kala dirista Guddigaas ay sax tahay iyo haddii aysan ahaynba. Waxa uu yiri “horta qof markuu shaqada kaa qaadayo, qofkii shaqada ku siiyaa kaa qaadaya”.
Laakiin, Mursal waxa uu ka gaabsaday inuu sheego sida uu Guddigaas ku sameysmay, mar la weydiiyey su’aal jawaabtaas dooneysay. Waxa uu yiri “taas markaan halkaas (Muqdisho) tagnaan faahfaahin doonnaa, inaan ka hor dhaco marabo, maxaayeelay go’aanka Baarlamaankaa (Golaha Shacabka) iska leh, laakiin waa la fasiri doonaa”.
Isagoo ka jawaabaya weydiin ahayd awoodda uu u leeyahay inuu ka hor yimaado go’aanka lagu kala diray Guddiga Maaliyadda, kadib markii ay sidaas sheegtay Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, ayuu Mursal ku jawaabay “waxa wax ka hor imaanaya shaqsiga maaha. Shuruuc baan leenahay anagu, shuruuc uun baana raaceynaa”. Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxa uu ku adkeystay in habka ay xal uga gaari doonaan kala dirista Guddiga Maaliyadda lagu sameeyey ay ahaan doonto si waafsqsan Xeer Hoosaadka Golaha oo kaliya.
Maxamed Mursal waxa ay dadka qaar ku xaman jireen inuu ahaa qof ay Dowladda Farmaajo ku garab istaagtay inuu noqdo Guddoomiyaha Golaha Shacabka, kadib markii uu xilkaas iska casilay Maxamed Cismaan Jawaari, si uu Xukumadda ugu difaaco Golaha. Hase ahaatee, waxa uu arrinkaas ku tilmaamay “mala awaal”. Waxa uu sheegay inuu Golaha Shacabku ka madax-banaan yahay hay’adaha kale ee dowladda, oo uusan ahaqsi wuxuu doono ka sameysan karin. Waxa uu iska fogeeyey inuu kaligii go’aan qaadan doono.
Kulanka 30-aad ee Golaha Shacabka oo wali qabsoomi la’
Kulanka 30-aad ee Golaha Shacabka oo wali qabsoomi la'